Strategies maka Irè Tweeting | Martech Zone
Strategies maka Irè Tweet
Wenezde, August 1, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Enwere m mmasị na data dị na akụkọ a site na Buddy Media na infographic si Fusework Studios. Ihe data a na-egosi ebe azụmahịa nwere ike iso ndị ahịa nwee mmekọ mgbe ha dị, jụọ ndị na-eso ụzọ ha ka ha mee ihe, ma mee ka ozi ahụ dị mfe. N'ezie, m na-agba ndị ahịa anyị ume ịnwale na ịlele. Ikekwe ndị asọmpi gị anaghị atụgharị uche na ngwụsị izu - ọ nwere ike ịbụ oge zuru oke maka ị lebara anya.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ data niile dị na infographic ahụ, budata akụkọ zuru ezu nke Buddy Media, Atụmatụ maka Tweet Ting: A Statistic Review. Na, hụ na ị ga-enyocha akwụkwọ ozi anyị ihe kpatara eji ewepu gi na Twitter!
Tags: ụlọ ọrụ fuseworksjirichaa gị tweetsTwitter
ROI nke Social Media
Aug 1, 2012 na 4:24 PM
Daalụ maka ịkekọrịta ozi anyị na saịtị gị, Doug. Anyị nwere ekele maka ya!